ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ပိုမိုအားကောင်းလာ « MMWeather Information BLOG
« 92B မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် MEDIUM သို့ ရောက်ရှိလာ »
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ပိုမိုအားကောင်းလာ
By mmweather.ygn, on May 21st, 2014
ယနေ့နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် data များအရ INVEST 92B သည် ယမန်နေ့ညပိုင်းက အရှေ့ဘက်သို့ ချိုးကွေ့လာခဲ့ပြီး နံနက်ပိုင်းတွင် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ပြန်လည် ချိုးကွေ့သွားခဲ့ကြောင်းတွေရပါသည်၊ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များအရ INVEST 92B သည် ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ် အနောက်ဘက် မိုင် ၁၅ဝ ခန့်၊ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၆ဝ ခန့်၊ လပွတ္တာမြို့ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ၂၄၅ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိနေပြီး မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။(ပုံ-၁)
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်များအရ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ပုသိမ်မြို့၏ အနောက်ဘက် တည့်တည့် ပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိချိန်၌ မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၂)
21 May 2014 0000Z
Location: 15.0 91.3
(ပုံ-၁) အပေါ် နှင့် (ပုံ-၂) အောက်
MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း INVEST-92B, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « 92B မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် MEDIUM သို့ ရောက်ရှိလာ »
2 comments to ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ပိုမိုအားကောင်းလာ
Log in to Reply	JTWC မှ 201800Z-211800ZMAY2014 အချိန်အတွက် ထုတ်ပြန်ချက် …
THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 15.0N 91.1E, IS NOW LOCATED NEAR 14.8N 91.5E, APPROXIMATELY 290 NM WEST-SOUTHWEST OF YANGON, MYANMAR.
RECENT ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY SHOWS DEEP CONVECTION PERSISTING OVER THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF A LOW-LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) EVIDENT IN A 201525Z AMSU IMAGE.
THE DISTURBANCE LIES EQUATORWARD OF AN UPPER-LEVEL RIDGE AXIS, IN AN AREA OF MODERATE EASTERLY VERTICAL WIND SHEAR AND FAVORABLE WESTWARD DIFFLUENCE ALOFT.
SEA SURFACE TEMPERATURES ARE CONDUCIVE FOR FURTHER DEVELOPMENT.
MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 20 TO 25 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1004 MB.
BASED ON A CONSOLIDATING LOW-LEVEL SIGNATURE AND MARGINALLY FAVORABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS REMAINS MEDIUM.
Log in to Reply	လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း INVEST 92B နှင့် အမြင့် ၁ ကီလိုမီတာတွင် တွေ့ရသည့် လေတိုက်ခတ်မှု အခြေအနေပြပုံ (TERRER MODIS)
« 92B မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် MEDIUM သို့ ရောက်ရှိလာ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum